21 YEEWHISKY EZIBIZA KAKHULU ONOKUZITHENGA NGO-2021 - UKUTYA NEZISELO
I-70 Iron Man Tattoo Uyilo lwaMadoda-Iingcamango zikaTony Stark Ink
Ezona zi-8 zeeMfene eziPhambili zaMadoda aTanda ukuPheka
Iingcamango eziphezulu ze-23 Harley Quinn Tattoo - [2021 Isikhokelo sokuphefumlelwa]
21 yeeWhisky ezibiza kakhulu onokuzithenga ngo-2021
Whisk (e) y ngukumkani.
Ezona whiskeys zibiza kakhulu zibiza imali eninzi nokuba ukhetha ukusela, ukuqokelela, ukuthenga okanye ukubiza. Amaxabiso aphezulu eencindi zamanzi zehlabathi ziya kuqhubeka nokukhula njengoko izinga lokuhla kwemveliso kunye nokhuphiswano lweebhotile ezinqabileyo linyuka.
Olu luhlu lulandelayo lwee-whiskeys ezingama-21 ezibiza kakhulu onokuzithenga kwi-Intanethi ziye zahlulwa zangamaqela, kungenjalo kuya kuhlala kuphela imithombo enye yamaJapan kunye neScotch whisky expression.
Apha uya kufumana ulwahlulo olubanzi kakhulu kwisitayile kunye nexabiso - iiMalts ezingatshatanga ezivela eYamazaki naseMacallan ziya kwenza amehlo akho abe ngamanzi - kodwa uya kufumana umfanekiso opheleleyo weentengiso zehlabathi (e) y amaxabiso phakathi kwezona zitayile ziphambili. Ngokuqinisekileyo kukho ii-whiskeys zeScotch ezibiza kakhulu (cinga ibhotile yokubhayiza ye-Isabella's Islay), ingqokelela, kunye nemiphanda enye phaya, kodwa ubukhulu becala zifuna ukwazi, ukuthengisa kwabucala, ingqokelela epheleleyo, okanye iziqwenga zefandesi.
Bona ngakumbi malunga - Umqokeleli wabucala kwiFandesi yeHlabathi yeQokelelo eNkulu yeHlabathi
Ndijolise kuluhlu kwii-whiskeys onokuthi uqale ngazo ukuthenga kwangoko (kuhlala kukho iitsheki kunye neebhalansi zokuthengwa kolu hlobo) ukuba unayo imali nentando. Njengesiqhelo, sela ngendlela efanelekileyo. Kwaye qiniseka ukuba uyenza ngokuzimisela kwakho kuzo zombini iibhotile kunye nokunyaniseka kwewebhusayithi ngaphambi kokuthenga!
I-whisky engatshatanga yaseJapan
1. I-Suntory Yamazaki Iminyaka engama-50 e-Old Malt Expressions
Ixabiso: $ 370,000 USD - $ 510,000 USD
Kukho iinguqulelo ezintathu ze-Yamazaki eneminyaka engama-50 ubudala. Uhlelo lokuqala (oluKhethiweyo) lwalufakwe ebhotileni ngo-2005, elesibini ngo-2007 laza elesithathu lango-2011.
Iibhotile ezingama-50 kuphela ezenziweyo kuhlelo lokuqala, kubandakanya neebhotile ezimbini ezityumkileyo, ezenza ukuba ibe yenye yezona whiskeys zinqabileyo zaseJapan, kwaye ke yeyona nto ibalaseleyo. Ukuba ujonga omncinci, kwaye ngexabiso eliphantsi u-Yamazaki, kukho iphephancwadi elineminyaka engama-35 ubudala elinexabiso elingaphezulu kwe- $ 120,000USD.
2. I-Karuizawa Vintage 1965 Cask # 8852
Ixabiso: $ 85,000- $ 90,000 USD
Iibhotile ngo-2017, emva kokuguga kwi-sherry cask ngaphezulu kweminyaka engama-52, eli binzana lamandla e-Cask lafakwa ebhotileni ngo-2017. Kukutshixa le whisky yaseJapan inqabileyo iya kunyuka ngexabiso ukusuka apha.
3. I-Malt ye-Ichiro-I-Ace yeSpades (1985-2006)
Ixabiso: $ 20,000USD - 80,000USD
Uchungechunge lwekhadi elilodwa le-malt elivela kwi-iconic elahlekileyo i-Japanese distillery Hanyu yikhadi elikhulu kwi-market ye-whisky. Ibhotile nganye kwiseti ye-Ichiro imele ikhadi lokudlala kumgangatho wamakhadi kwaye yafunyanwa kwibhaskiti enye ukusukela ngo-1985 ukuya ku-2014.
Iibhotile zomntu ngamnye ezivela kuthotho lweKhadi lokuDlala leIchiro ukusuka kwi- $ 20,000- $ 80,000 USD yeentetho ezithandwayo ze-Ace. Uthotho lweKhadi elipheleleyo le-Ichiro ye-Single Malt i-whisky yaseJapan ethengiswe nge-HK $ 11.9 yezigidi (i-US $ 1.5m) kwiveki ephelileyo.
Bona ngakumbi malunga - Uluhlu lweKhadi elipheleleyo leIchiro lithengisa nge- $ 1.5 yezigidi
I-Malt Scotch Whisky engatshatanga
4. IMacallan Lalique
Ixabiso: $ 88,000- $ 155,000 USD.
Kulungile, ndiye ndaqhatha ke apha. Kukho amabinzana amane e-malt avela kwi-Macallan kwi-Lalique Crystal decanter (eyona mali intle kakhulu ye-French crystal inokuthenga) ngexabiso ukusuka kwi-88,800 USD- $ 155,000 USD.
Le minikelo inqabileyo kakhulu yeMacallan imele ezona zintle kwiimalts ezindala ezingatshatanga. Into eboniswe apha ngasentla yiMacallan 50 yeminyaka ubudala eLalique, eza ngebhokisi yesipho esimangalisayo kunye nawo onke amaphepha afunekayo ukungqina ukuba semthethweni kwayo.
5. Inqanaba elilandelayo leMacallan
indawo yokugcina izinto zangaphambi kwexesha eyadini ngaphambili
Ixabiso: ukusuka kwi- $ 43,000 ukuya kwi- $ 8800 USD
Ukugcina umgqomo we-malt scotch yakho ilungile kangangesiqingatha senkulungwane kubonakala ngathi lishishini elilungileyo, ngakumbi ukuba ungomnye weefililleries ezithandwayo zehlabathi. Ibhotile nganye enexabiso elininzi ayinasiphelo seMacallan Lalique Crystal, nangona kunjalo ulwelo oludala ngaphakathi yenye ye-whisky ye-malt enye eqokelelwa ngumqokeleli.
Kukho iibhotile ezijikeleze i-10-20 zale 'tier yesibini' (egigithekayo) iMacallan whiskeys entle ekhoyo, kubandakanya iiseti ezinomdla ezikhutshwe njengenxalenye ye-Macallan Distillery Golden Age of Travel. Ibhotile ebonisiweyo yiMacallan 52 Year Old (ukukhutshwa kuka-2018), yenye yeebhotile ezingama-250 kuphela ezenziwe.
6. IDalmore - Candela Iminyaka engama-50 ubudala
Ixabiso: $ 110,000- $ 120,000 USD
UCandela yiyunithi yamazwe aphesheya yokulinganisa ubungakanani bokukhanya. Ichaza ubukhazikhazi, yitsho amanqaku asemthethweni kaDalmore malunga nale bhotile ikhethekileyo eqaqambileyo ye-whisky ye-malt enye.
Amanqaku okungcamla avela kwi-Master Blender Richard Paterson gush malunga nale whiskey inqabileyo ivela kwii-Highlands, ngomxube weziqhamo ze-citrus kunye neziqhamo ezomileyo ezinikiweyo ezihlangana kunye nomdlalo obalaseleyo. IDalmore inexabiso eliphantsi elineminyaka engama-50 ubudala (nje i- $ 102,124.18) eza ngokukhanya kancinci kwisipaji…
7. UBalvenie Uneminyaka engama-56 ubudala ngo-1962 (cask 5575) - iBalvenie DCS Compendium Isahluko sesihlanu (70cl, 42.1%)
Ixabiso: $ 40,000- $ 45,000 USD
Le Balvenie, enye eyaziwayo i-Speyside malt eyodwa, yakhululwa ngembeko kwi-Malt Master yenkampani, uDavid C. Stewart, kwaye yahlanjululwa ngonyaka omnye uStewart waqala ukusebenzela iBalvenie. Yafakwa kwi-oki yaseSpain u-Oloroso sherry hogshead eyayizaliswe nge-29 kaJuni, ngo-1962.
Xa kwakhutshwa iDCS Compendium Isahluko 5, uStewart uxelele Umhambi we-Elite : Ndibe nethamsanqa ngokwaneleyo ukuba ndinikwe inkululeko yokwenza izigqibo zesitokhwe ngokusekwe kukhetho lwam kunye nombono, ngokukhululeka ukukhetha i-casks kwaye ndibambelele kwi-whisky, ndingasoloko ndisazi ukuba ndiza kwenza ntoni ngayo, asikho esinye isizathu ngaphandle kokucinga ngenye imini iya kuba yinto engaqhelekanga. Kum, oku kukuzonwabisa ngendlela ebukhali.
8. Uluhlu lukaBowmore
sally nightmare ngaphambi kwekrisimesi tattoo
Ixabiso: $ 45000- $ 73,800 iUSD
I-Bowmore Distillery ikwanazo neembonakalo ezimbalwa ze-Islay ezizodwa ezifumaneka kwibhotile ephezulu. Uninzi lwachithwa kwi-1960's, ngokuqaqanjelwa yi-Black Bowmore 1964 I-Fifty Year Old- The Last Cask.
Incasa ye-Black Bowmore ichazwa njenge, Incasa emnandi yesilika yemango, iziqhamo ezinomdla kunye nobusi be-acacia obudityaniswe namandla evelvet chocolate espresso. Kunyaka olandelayo, uSotheby waseHong Kong uzakubambisana noBowmore ukunika ithuba elinqabileyo lokufumana ingqokelela epheleleyo ye-Islay Black Bowmore ye-malt whisky ngqo kwi-Bowmore distillery.
Bona ngakumbi malunga - Iqabane likaBowmore kunye noSotheby kuQokelelo lweeNdawo eziNtsundu
9.I-Highland Park eneminyaka engama-50 ubudala (Ibhotile ka-2010)
Ixabiso: $ 40000 - $ 45000 USD
Ziibhotile ezingama-275 kuphela ezathi zaveliswa ngokufakwa kwiibhaskithi ezintlanu ezazigcwaliswe ngo-1960. Ichazwa njengedram etyebileyo neqholiweyo, nentsalela yomsi ogqityiweyo.
Eli binzana liyi-whisky ebiza kakhulu, zombini kulwelo lwangaphakathi kunye nokupakishwa kwezinto, ezibandakanya ibhotile efakwe kumnatha wentsimbi ogcwele umfanekiso weRose Window e-Orkney's St Magnus Cathedral.
Njengoko usela iwhiskey, ifestile iyatyhilwa kancinci.
10. Glenlivet 1943 Iminyaka engama-70 yoQokelelo lwaBucala lwaBucala iG & M
Ixabiso: $ 43000 - $ 46000
I-Glenlivet distillers igcwalise ngononophelo i-sherry cask number 121 ngaphambi nje kokuvala imveliso ngexesha leMfazwe yesibini (II) yeHlabathi. Le Glenlivet 70 Year Old single malt whisky evela kuGordon & MacPhail's Private Collection inamanqaku antsonkothileyo aquka itshokholethi emnyama, iorenji, itreacle, licorice kunye nobuqili, umsi othukayo.
Ibhotile nganye enqabileyo kwingqokelela yenye yee-decanters ezikroliweyo zegolide ezingama-40 kwaye iboniswa kwibhokisi eyenziwe ngomthi eyenziwe ngesandla eza nencwadi kunye nesiqinisekiso sobunyani.
11. I-Hibiki 35 Unyaka Omdala u-Arita Takumi 2017 I-Ceramic Decanter
Ixabiso: $ 35,000- $ 40000 USD
Inguqulelo ye-Hibiki engama-35 ubudala khange ifakwe ebhotileni iminyaka eliqela, kwaye ngenxa yokunqongophala kwee-whiskeys ezindala nezindala kakhulu zaseJapan wonke umntu woyika ukuphinda ayibone le premium whiskey enqabileyo kwakhona. Iibhotile ezingafakwanga ezifakwe kwi-47% ye-ABV, i-Hibiki engama-35 ubudala iqulethe iimalts ezingatshatanga kunye nee-whiskeys zokutya okuziinkozo ezindala kwiindidi ezahlukeneyo zemigqomo enje ngeSherry, iBourbon neMaskunks.
Ukuhlonipha nokumakisha isikhumbuzo seminyaka engama-400 sokubonakala kwe-porcelain eJapan, iingcibi zaseSuntory nezaseJapan zenze uyilo lwendabuko olubandakanya ukumila kweebhotile zokudibanisa zeHibiki ezidibanisa imizobo enemibala yeentyatyambo ze-peony kunye namabhabhathane.
12. Amagqabantshintshi eNdibano yeRoyal
Ixabiso: $ 4,000 - $ 40,000 USD
Imakethi yokunethezeka yee-whisky zexabiso eliphambili zilawulwa yiRoyal Salute, ezinye zee-whiskeys zazo zibhotwe ngaphambi kokuqala kweMfazwe yesibini (II) yeHlabathi. Eyona nto ipholileyo ngabo ngama-decanters amadala kunye nokupakisha okubonisa ukuba mdala kangakanani le whisky.
ikhonkrithi yokuhamba ngomda wepavini
Elona xabiso liphezulu lixubileyo iwhiskey yeScotch efumanekayo ngonqakrazo nje yiRoyal Salute 50 Year Old Coronation Cask expression ekuqaleni kwe- $ 40,000USD. Kwakukho iibhotile ezingama-255 kuphela ezenziweyo zohlobo lweScotch whisky.
13. UBallantine oneminyaka engama-40 ubudala
Ixabiso: $ 8000 - $ 9000 USD
Kuphela ziibhotile ezili-100 ngonyaka zalo mxube ugqibeleleyo ukhutshiweyo, kwaye nganye inamanani ngesandla. Impumlo ibomvu ngamapere avuthiweyo kwisiraphu kunye necake yeziqhamo ezityebileyo, ene-sinamoni kunye nejinja yengcambu. Elwimini ukudibanisa kunika iincasa ezinemigangatho emininzi, kubandakanya itofi etyebileyo kunye neapile ebomvu ebomvu ethambileyo ngaphambi kokugqitywa kwexesha elide.
14. I-Chivas Regal ye-25 yeminyaka yeebhotile ezindala zowe-1930 George V
Ixabiso: $ 5000- $ 6000 iUSD
Eli xesha lakudala lafakwa ebhotileni ngeminyaka yo 1930 ngexesha lolawulo lukaKing George V. Ibhotile endala kakhulu yayineminyaka engama-25 ubudala ngaphambi kokuba ifakwe kwibhotile yesayizi yeelitha ezili-1.13 ezithandwa e-UK nase-Yurophu ngaphambi kweMfazwe yesibini (II) yeHlabathi ngelo xesha. . Le yibhotile enqabileyo oyithengayo kwaye akunako ukuzizisela ukuba usele.
15. Ukudweba iminyaka engama-37 ubudala-Ukuqokelelwa kweVintage Reserve
Ixabiso: $ 7500- $ 8000 USD
I-Teeling engama-37 ubudala yi-whisky ebizayo yaseIreland evela kwiVintage Reserve Collection. Kwakukhulile kwiibhasikithi zangaphambili ze-bourbon, kunye nokuhamba okuncinci kweebhotile ezili-175.
Esi sikolo sidala saseIreland se-malt whisky sinika ivumba leepesika eziMhlophe, ingca esikiweyo, itshokholethi emhlophe kunye nokucebisa iiamangile. Kwinkalakahla uza kufumana ipesika, ubusi, ityuwa yolwandle kunye nokuthamba kweziqholo ezifihlakeleyo eziqhubeka zibe mellow, ngokwesiqhelo iwhiskey yaseIreland.
16.UJ. UCorry Uneminyaka engama-27 ubudala ngo-1991 - oKhethiweyo
Ixabiso: $ 6,500 - 7,000 USD
Ichithwe ngo-1991 kwaye ishiywe kangangeminyaka engama-27, le whiskey ye-malt eyodwa yase-Ireland emva koko yabhotywa kumandla e-cask angama-52% ABV kwaye abizwa ngokuba nguKhethiweyo (ndihlala ndilapha igama elihle). Ibhotile yeWhisky ekhethiweyo iza ngesiphatho sesandla, ikristale esikwe ngesandla ehamba nebhokisi yokubonisa ngomlotha.
Kukwakho nesampulu eyahlukileyo yesidrama kwisingxobo somthi sokukusindisa ekuvuleni ibhotile.
Iwhisky yaseMelika, iBourbon kunye neRye
17.Old Oscar Pepper 1911 Unyaka Omdala om-6 (Ibhotile ka-1917)
Ixabiso: $ 4000-4500
Le Imbali yeWhisky yaseMelika kwibhotile.
U-Oscar Pepper u-100 obhalwe ngebhotile kwi-Bond wafakwa kwi-Old Oscar Pepper Distillery ngo-1911 yaze yafakwa kwibhotile kunyaka nje phambi kokuba ivalwe ngo-1917. I-Distillery yakhiwa ngokutsha ngo-1935 yathengwa ngo-1940 ngu-Brown-Forman, apho ivelisa khona iWoodford Reserve Iwhisky.
Ngokwe-US. Ithala lencwadi leCongress isiza seDistillery sigcina ukuthembeka kwembali yedisili ukusuka kwindawo zaphambi nasemva kokuThintela umzi mveliso, kunye nokugcina indawo yasemaphandleni eVersailles, eKentucky. Uya kuba nzima ukufumana i-whisky ebiza kakhulu enomdla njengale.
18. UPappy Van Winkle Expressions
Ixabiso: $ 2300 - $ 2600 USD
Iveliswe kusetyenziswa iVour Winkle yosapho enefriji ene-bourbon enegwele yereyiphu yomxhesho, i-bill ye-mash eyahlukileyo ivumela ubumnandi kunye ne-oaken flavour ukuba ingene kwiglasi nganye yalo moya ungummangaliso. Umgqomo ngamnye we-oak ococekileyo ubeka ungaphazanyiswa kangangeminyaka engama-23 ngaphambi kokuba ugqitywe kunye neebhotile, ukwenza i-bourbon egudileyo nengcolileyo yokunambitha i-caramel, umbona kunye ne-oki.
Ukunqongophala kukaPappy Van Winkle nokubonakala kwayo njengebhotile yeWhisky yaseMelika yemeko iqinisekisa ukuba yeyabathandi bourbon abaqokeleli bohlobo lomgangatho ogqwesileyo, kwaye ifanelwe ithegi ephezulu yexabiso. UPappy van Winkle naye unexabiso elincinci, kodwa ngokuthathelwa ingqalelo ngokulinganayo (abanye bathi iyathandeka ngcono) kunye nohlobo olunqabileyo lweminyaka engama-20 ngokunjalo.
19.William Larue Weller Bourbon (Ibhotile ka-2014)
Ixabiso: $ 1500- $ 2000USD
iindawo zokufumana iitattoo ezinokufihlwa
UWilliam Larue Weller yingqokelela ye-Antique engafakwanga, engacocwanga, eneebhothoni ezinamavili ezibhotile kubungqina obuyi-140 (70.1% ABV) kunye nebhotile kwiBuffalo Trace Distillery. Ithole amanqaku angama-97 kwi-Whisky Bible kaJim Murray, oqaphele ukuba i-Weller yenye yezo whiskeys ezenza ubomi bube nentsingiselo…
20. I-Sazerac Rye ye-18 yeminyaka ubudala (Ibhotile ka-2012)
Ixabiso: $ 1300 - $ 1800USD
Le Whisky yaseKentucky eQhelekileyo iRye Whisky ibonelela ngesiqholo esimnandi kunye nobumnandi obomileyo kulwimi.
Iqolile kakhulu ngeminyaka eli-18 ubudala, le Sazerac ibonelela ngamanqaku e-oki, isikhumba, imolasses kunye nazo zonke iziqholo. Amaconsi amade kwi-rye spice spice eyongezwe yimikhondo yesinamoni, ivanilla kunye nepepile.
21. I-Biltmore Pure Rye Whisky (kwii-1920 zebhotile)
Ixabiso: $ 1300 - $ 1600USD
Le Whisky yaseCanada eyiRye emsulwa inika enye ibhotile yewhisky enqabileyo yakudala, ngeli xesha ukusukela kwiminyaka yoo1920 nguHiram Walker & Sons. Le whisky ebiza kakhulu ngenxa yeempawu zayo ezinqabileyo ngokukodwa, iBiltmore Rye ibhotile phantsi nje kwelitha kubungqina obu-100 kwaye irye ehloniphekileyo ayisasebenzi kwimveliso.
Akukho nto ingako sinokuyithetha, njengoko le nto yomqokeleli ayilulo uhlobo lwebhotile ekhethekileyo yokuqhekeka kwaye idluliswe ngeholide ngumthandi omkhulu we-whisky.
Iingcamango ezingama-73 zokuLoba iiTattoo [2021 Isikhokelo sokuphefumlelwa]
I-75 ye-Sparrow Tattoo Uyilo lwaMadoda-Iingcinga ze-Ink zamadoda
Iinwele ezimfutshane eziMdaka zaMadoda-Iingcinga zeenwele ze-70 zamadoda
Ukunyamekela emva kweTattoo-Isikhokelo esiqinisekileyo kwiNkqubo yokuNyanga
Iingcinga ezingaphezulu kwama-63 zeMandala Tattoo [2021 Isikhokelo sokuphefumlela]
I-Sapporo Breweries ikhupha uMbindi wamandla eSapporo Sour Water
Imibono yocingo lwe-diy yezinja
abafana abaneenwele ezimfutshane ezigobileyo
igama le tattoo izimvo kubafana
Ingelosi kunye needemon yoyilo
Eyona tattoos yabasetyhini ehlabathini